Ngaba Amashishini Amancinci adinga ukuThengiswa kweeNjini zoThando
Inzululwazi yokuthengisa (okanye i-SEM) idlala indima ebalulekileyo kuyo nayiphina isicwangciso sokuthengisa ngokuphumelelayo kwi-intanethi. Kuye kwabonakaliswa ngamaxesha amaninzi ukuba i-SEM iyona khetho efanelekileyo kumashishini amancinci. Injongo ephambili kukunyusa ukubonakala kwabo kwiwebhusayithi kwi-SERPs. I-SEM ijolise ekuletheleni amathuba akho ngqo kwi-Google, Yahoo, Bing kunye nezinye iinjongo ezinkulu zophando.
Yintoni efanelekileyo nge-SEM kukuba le ndlela yokuthengisa i-intanethi ayibiza kakhulu kuneendlela ezininzi zokuthengisa zangaphandle zangaphandle. I-SEM ikhusela ngokukhawuleza iphinde ikhulise amashishini amancinci ngokubhekiselele kubathengi abakhona xa befuna uhlobo lweempahla inkampani yakho inika - pajarita amarilla.
Izixhobo zoPhando lweeNjini zoKhenketho
Akumangalisi ukuba ukuthengiswa kweenjini zentengiso kubamashishini amancinci kusebenza kakuhle xa kuthatha indlela epheleleyo. Iingcali ze-SEM zincoma ukuba udibanise zonke ezi zinto zilandelayo kwisicwangciso sakho sokwenza itengiso ye-injini:
I-Optimization ye-Injini yokuSesha (okanye i-SEO): Inika ukubeka bhetele kumaphepha ewebhu abonwa yiGoogle afanelekileyo kunye negunya. Xa kuphunyezwe ngokuchanekileyo, i-SEO yandisa amathuba akho okufunyanwa xa ithemba lakho lifuna umkhiqizo okanye inkonzo efana neyakho.
Ukuhlawula ngeKhomboza Ukupapashwa: Ivumela abanikazi bezentengiso ukuba bathenge iintengiso kwi-Google ngokusekelwe kumagama abalulekileyo abakhethiweyo. Umrhumo ohlawulayo ngokuqhelekileyo unqunywe inani labasebenzisi abasebenzisi bewebhu bechofoza kwiintengiso zakho.
I-SEO yengingqi: Izisa izithuthi kwindawo yokucwaninga kwendawo. Ukwandisa i-site yesitratti sakho kunye nokuxhuma nawe ngamathuba afanelekileyo asekuhlaleni ngokujoliswe kuyo.
Ulawulo lweeNkcukacha: Ukubeka esweni i-media presence yakho, kubandakanya ukuhlaziywa kwe-intanethi kwiiplani ezahlukeneyo, izithuba zeblogi, ii-tweets kunye namanye amanethiwekhi. Iinzuzo amashishini amancinci ngokulungisa ulwazi olungachanekanga. Kuthatha amanyathelo ukuqinisekisa ukuba abathengi bakho bazive beve. Kubalulekile ukuba uphendule ngokufanelekileyo kwaye ukhuthaze abathengi bakho ukuba bathumele ukuhlaziywa okunyanisekileyo.
njani Amashishini amancinci angayifumana njani kwiKhenketho yeeNjini zoPhando?
Ii-injini zophando ziye zashintsha ngokugqithiseleyo kwiminyaka, kwaye ke benza i-SEM ephumelelayo. Kule mihla, ubuninzi bezonxibelelwano kwizinto eziphathekayo ezincinci kunomgangatho walezo zixhumanisi. Ibali elifutshane elifutshane, i-website edibanisa nolondolozo lwakho kufuneka ibaluleke kakhulu kwishishini lakho kwaye lihlonishwe kwishishini lakho.
Kwi-ishishini lezakhiwo zentengiso, ikhonkco elisuka kwisiza se-inshurensi eyaziwayo, umzekelo, ithwala ubunzima ngaphezu kwekhonkco kwi-blog yefestile okanye kwiwebhsayithi ene-spammy content.
Kukho iindlela ezininzi zokwenza ukwandisa umgangatho wakho wekhonkco. Iingcali ze-Semalt zincoma ukuba unamathele ezi zilandelayo:
Ukuvelisa umxholo omtsha noluncedo rhoqo, ngaba ngamaqaku, izithuba zeblogi, uphando lweefowuni, amaphepha amhlophe okanye iividiyo ezicacileyo;
Ukufaka amagama angundoqo ngokwemvelo kumxholo;
Ukwenza umxholo wakho ufumaneke;
Ukuqhagamshelanisa nokuqhagamshelana neenkampani zendawo ukuba zithole i-backlinks kwiindawo zabo;
Ukudala iphepha lomthombo wendawo onika ulwazi malunga namashishini amancinci okanye iziganeko kwindawo yakho, ukuze ezinye iindawo zendawo zidibanise newebhusayithi yakho.
Ukuba ufuna ukuqiniseka ukuba abantu bayifumana indawo yakho ngokukhawuleza xa befuna iimveliso okanye iinkonzo zakho, ke ungcono ukujonga ukuthengiswa kweenjini zenjini.